Digital Laser Machine Goynta Die
Mashiinnadayada goynta leys-dijitaalka dijitaalka ahi waxay bixiyaan shaqooyinka gaarka ah ee meelaynta otomaatigga ah, xawaaraha otomaatiga ah isbeddelka iyo shaqooyinka isbeddelka ku yimaada duulimaadka. Iyada oo waxqabad la isku halleyn karo, hawlgal fudud. Looma baahna dhimashad Rotary.
Qaybaha laser-ka asaasiga ahi waxay ka kooban yihiin noocyada laser-ka ugu sarreeya adduunka noocyo kala duwan oo leh moodello ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah u leh hal madax, madaxyo labalaab ah iyo madaxyo badan xulashooyinkaaga
Naqshadeynta qaabdhismeedka ah ee 'UV Varnishing', dukumiintiyo, bireed qabow, jeexjeex, duub xaashida iyo qaybaha kale ee shaqeynaya. Tiknoolajiyaddan ayaa ah xalka ugu fiican ee saxaafadda kadib loo gudbiyo sumadaha dijitaalka ah.
Qaab No.: LC230
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser-ka ee Qalabka Milicsiga / Filimka Wareejinta
Laser dhinta-cut wax milicsiga, fiican ee warshadaha dharka-muuqaalka sare. Otomaatiga-geedi socodka oo dhan. Dhab ahaan goynta leysarka